वि पदमा परेकाको उ द्धार, रा हत र पुनस्र्थापन प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन…हेर्नुहोस। – Nepal Online Khabar
Prevअमिताभ बच्चनलाई को’रोना भाइ’रसको संक्र’मण पु’ष्टि…हेर्नुहोस् ।
Nextप्रधानमन्त्री ओलि र प्रचण्ड बिच नजिक पुग्दै सहमति …हेर्नुहोस।
खाना खाए लगत्तै ब्रस गर्ने बानी छ ? आजैबाट छोड्नुहोस्…हेर्नुहोस् यस्ता छन असरहरु !
नेकपामा फेरि भाँडभैलो :यी ४ भाईले घेरा हाले ओलीलाई, अब के होला ?